Ukuhlasela kwa-Lee kuhlela umdlalo ozocacisa nge-series
Indlela yokuhlasela yama-runs awu-60 emabholeni awu-31 ehlanganiswe u-Lizelle Lee kusize ukuthi ama-Proteas esifazane alinganise i-T20 series enemidlalo emihlanu kube u-2-2 emuva kokunqoba umdlalo ngezinti ezine e-Willowmoore Park e-Benoni ngo-Lwesithathu.
Lomdlali oshaya ngesandla sokudla ushaye o-four abawu-11 njengoba iqembu lasekhaya libeke umphumela wesibili omkhulu kuma-T20 international ukujaha umphumela onzima u-173 futhi banqobe kusele amabhola amahlanu.
Kube umzamo omuhle ka-Lee, u-50 wakhe wesishagalolunye kuloluhlobo lwekhilikithi, futhi kusize ama-South Africans ahlele umdlalo ozocacisa nge-series enkundleni efanayo kusasa.
Bedinga ukunqoba umdlalo ukuze bangahlulwa kumqhudelwano, iqembu lasekhaya likhethe ukushwiba kuqala emuva kokunqoba i-toss, isinqumo esibukeke singalungile ekuqaleni njengoba i-Pakistan ihlanganise umphumela ophezulu kunayo yonke kwi-series.
Oshaye kakhulu u-Nida Dar njengoba ethole i-career-best u-75 osheshile kuno-Lee – ukuhlasela kwakhe kuthathe amabhola awu-37 okubalwa khona o-four abayisishagalombili no-six abathathu. Iqembu lase-Asia lizithole enkingeni kabili ngaphambi kwalokho emuva kokuthiu-Shabnim Ismail (2/20) no-Nadine de Klerk (1/40) bahlasele ekuqaleni ukubashiya ku-10/2. Kodwa ukapteni u-Bismah Maroof (37) uphinde watakula iqembu lakhe ngokuhlanganisa u-106 ngenti yesithathu eshaya no-Dar, ngaphambi kokuthi u-Aliya Riaz ashaye u-35 emabholeni awu-17 ukuqhuba iqembu ngasekugcineni.
Lokho kukhuphule i-Pakistan ku-172/5, umphumela obumkhulu kwiqembu lasekhaya. Nokho u-Lee, ebenezinye izinhlelo futhi waliqalisa kahle iqembu lakhe eshaya no-Tazmin Brits (18) bobabili bahlanganisa u-74 kuma-overs awu-7.5.
Izinti ezimbili ezisheshile kwizivakashi kubeke i-South Africa ku-89/2, ngaphambi kokuthi o-20s ababalulekile abashaywe u-De Klerk no-Chloe Tryon (21) kanye no-17 emabholeni ayisishagalolunye okushaywe ukapteni u-Sune Luus kubadlulisele phambili. Bekusalele u-Sinalo Jafta (14) no-Ismail (10 engaphumanga) ukunqobisa i-South Africa.
Yonke i-T20 series phakathi kwe-South Africa ne-Pakistan izovezwa ku-YouTube we-Cricket South Africa. Ukuhamba komdlalo kuzotholaka ezinkundleni zokuxhumana ze-Cricket South Africa ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa). Ungaphinde ukuthole ku-1World Sports Radio.
u-Luus no-Moreeng bakhaliswa ukungazinzi behlulwa kwi-T20I yesithathu U-50 ka-Kapp no-Lee kulinganisa i-T20 series All-round Nida Dar puts Pakistan 1-0 in T20 series Ama-Proteas esifazane azimisele ngokuthuthuka kuyela kumdlalo wokuqala we-T20 series enemidlalo emihlanu South Africa ne-Pakistan bayalingana kwi-ODI yokugcina, balingana ngo-1-1 kwi-series u-Moreeng usekela ukuqina komqondo kwi-South Africa kanye nekhono lokubuya kahle kuyela kwi-WODI yesibili u-Kapp uyakujabulela ukufika ukuqopha umlando kumsebenzi wakhe i-South Africa ihlelele i-ODI series yabesifazane Abancane babheke ukuthatha amathuba kuhambo lama-Proteas esifazane Ama-Proteas esifazane agculisekile ngamalungiselelo ngaphambi kohambo lasekhaya ne-Pakistan Ugculisekile u-Nackerdien ngokunwebeka kwabanamathalente